Nwere ike ịmepụta akwara ụkwụ na-enweghị ibu? - Mmega
Isi > Mmega > Mgbatị ụlọ maka ụkwụ - ihe ngwọta
Nwere ike ịmepụta akwara ụkwụ na-enweghị ibu?
Mmeghari uche nke abụọ dị ka squats na push-acha ọkụ bụ nnukwu mmega ahụiru ikenaakwara na-enweghị ibu arọ. Ime ihe omumu nke otu ihe n'ime arunwere ikekwe ka ndị na-ebuli onwe ha elu jiri aka ha gbagoo ma nwetakwuoakwarauto naumemmepe.
Nke a bụ otu nde dollar ajụjụ maka gị: gịnị bụ ihe nzuzo na-achọ ike na ike? Echere m na nnukwu, akwara obi, ogwe aka buru ibu na ngwugwu isii, nri? Ma ị gaghị echefu Legbọchị Legkwụ! Ndi be anyi, ichoghi ka odi ka ijeghari na onu eze! Chefuo mgbatị ahụ wee nwaa mgbatị ụlọ a ọsọ ọsọ! Bido na 1. Ije Ije Na-aga Nnukwu ije gaa ụkwụ aka nri gị.
Rọọ ụkwụ aka ekpe gị ka ikpere gị fọrọ nke nta ka ọ metụ n’ala ahụ. Jirizi ụkwụ aka nri gị bugharịa ahụ gị n’ehihie ọzọ. N’oge a, aka ekpe gị kwesịrị ịdị n’ihu gị, ụkwụ aka nri gị kwesịrị ịgbada n’ala.
Mee uzo ato ato nke ugboro iri na abuo. Chetakwa ka iwere ezumike nkeji iri abụọ n’otu n’otu n’otu. Na mgbatị ahụ a, uru ahụ dị n’iru ụkwụ gị na-arụ ọrụ nke ọma ka ha na-emegharị ahụ gị niile na ihu.
Ọ bụghị naanị na nke a ga - eme ka mọzụlụ ụkwụ gị niile ike, kamakwa ọ na - eme ka nguzosi ike na nkwụsi ike gị ka mma. 2. Mgbe niile squats kwụ ọtọ na ụkwụ gị ubu-obosara iche na ụkwụ gị yiri ibe.
Kpoo ikpere gị iji nwayọ belata ahụ gị na ala. Were ya na ị nọ ọdụ n’oche a na-adịghị ahụ anya. Gbada ruo ókè i nwere ike, debe obi gị na isi kwụ ọtọ, ma hụ na ikpere gị agaghị agabiga mkpịsị ụkwụ gị.
Nọgide n'ọnọdụ a maka sekọnd 3 ruo 5, wee bilie ọzọ site na ịkwanye n'ikiri ụkwụ gị. Squats bụ isi na-arụ ọrụ ụmụ ehi gị, akwara ụkwụ, na quads, mana ha dịkwa mma maka iwulite ihe gị na iwusi ala na azụ gị ike. Ha bụkwa nnukwu ụzọ iji gbaa ọtụtụ calorie ọkụ ngwa ngwa, chekwaa ma melite ahụike obi gị na oke ume.
Mee ugboro atọ nke ugboro iri na abụọ nke ọ bụla, mana izu ike n'etiti - ịkwesịrị ịga n'ihu na mmega ahụ na - esote, nke bụ
Squat Jumps Dị ka ị mere mmega ikpeazụ, gbatuo ala, na-agbadata ahụ gị ka apata ụkwụ gị kwekọọ na ala. Nọgide n'ọnọdụ a ma ọ dịkarịa ala 3 sekọnd. Mana oge a ị ga-atụfu onwe gị site na nkpu.
Ka ị na-amali elu n’ikuku, welite aka gị n’elu isi gị. Kpoo kpakpando wee gbagoo ọzọ. enweghị nkwụsịtụ n'etiti nkwụsị! 3 set nke 12 iberibe zuru okè maka nke a kwa, ma na-ezumike nke 30 sekọnd izu ike n'etiti tent! Omume a ga - enyere aka idobe ụmụ ehi gị, quads na hammies (mmm, ham) yana oke gị na akwara gị.
Ọ dịkwa mma na ọ gụnyere ogwe aka ntakịrị karịa squats ọdịnala na n'ezie ọtụtụ kadio ọzọ! 4. Gbasaa squats can nwere ike iji ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị maka mmega ahụ: sofa, oche, ihe ndina gị. Ihe kachasị mkpa bụ na ọ kwụsiri ike iji jide ụfọdụ ibu gị ma ghara ịgabiga n'oge mmega ahụ, kwụ n'azụ gị na arịa ụlọ ị họọrọ ma tinye ụkwụ aka nri gị na ya, jiri nwayọ lace ije ije na aka ekpe gị ruo mgbe ikpere aka nri gị fọrọ nke nta ka ọ metụ ala.
Jide ya maka 3 sekọnd (whoa! Gbalịa ijide nguzo gị!), Jirizie ụkwụ aka ekpe gị bilie ọzọ. Mee usoro 3 nke ugboro iri na abụọ na ụkwụ ọ bụla, na-enweghị ezumike mgbe ị gbanwere ụkwụ. Ezumike nke abụọ nke 30 n'etiti etiti dị mma ma eleghị anya ọ dị oke mkpa! Nke a bụ nnukwu mmega ahụ dị ka ụkwụ ụkwụ ụkwụ dị omimi na-arụ ọrụ na mọzụlụ na-akwụ ụgwọ ma dị ka ego ga-eme ka nguzozi gị ka mma! Na mgbakwunye, ị nwere ike ịme otu kwa Jide dumbbell n'aka ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwere nke a 'nzọụkwụ' elu heh-heh! 5.
Ngwurugwu squat gbadata n'ọnọdụ mmalite maka squat (ụkwụ ubu n'obosara, na-atụ aka na jazz niile). Sọsie ike ọzọ ruo mgbe apata ụkwụ gị ga-adakọ n’ala. Ma n’oge a, mgbe ị ruru n’ebe dịkarịsịrị ala na squat gị, mee ‘pulses’ ole na ole site na ị na-emegharị ukwu gị na ala ihe dịka sekọnd ise.
ịgba ígwè nnu mbadamba
Mgbe ahụ laghachi na mmalite ọnọdụ. Ihe aghụghọ bụ na ị na-agba ọsọ ahụ, ị ​​na-arụ ọrụ ma na-akpali akwara ụkwụ gị oge niile. Na mgbakwunye, ịnwere ike ijide mmegharị ahụ ogologo oge ma mee ka akwara gị dị iche iche karịa na ọ bụrụ na ị na-eme squat nkịtị.
Mee mgbatị ahụ a oge a n’otu oge ma were oge ezumike nke iri atọ tupu ịga n’ihu 6.
Elu Nwa Elu ebuli Ee, ka anyị kuru ume na apata ụkwụ ndị ahụ wee rụọ ọrụ na ụmụ ehi gị! a mma ngọngọ na drooping ọba ụkwụ. (Ọ bụrụ na ị nwere steepụ, buru nzọụkwụ mbụ.) Ọ bụrụ na itule adịghị mma, jidesie mgbidi dị nso ike maka nkwado.
Welie ikiri ụkwụ gị ka e wee mee ka ịdị arọ ahụ gị niile dịrị na bọọlụ dị n’ụkwụ gị, gbadaa ikiri ụkwụ gị n’okpuru n’ala dị ka o kwere mee ka i wee nwee ike ịgbatị ụmụ gị mara mma. Ime 3 set of 12 reps with a 30-second break between sets of dumbbells in your free hand will do even better, nke bara uru karịsịa mgbe ị wuliteworo ike dị ukwuu nke na ahụ gị adịghịzi ezu. Omume a na-eme ka ụmụ ehi gị buru ibu, sie ike, ma kọwaa ya; gbakwunyere, ọ na - eme ka nkwonkwo ụkwụ gị dịkwuo ike ka ị ghara ịla azụ ma ọ bụ gbagọọ agbagọ. 7.
Nọdụ ala ezumike malite site na iji ụkwụ aka nri gị gaa n'ihu ma na-agafe ogwe aka gị n'obi gị. Kpoo ikpere gị ma wedata ahụ gị n'ime ime nri ehihie. Ikpere aka ekpe gị kwesịrị ịmị aka na ala.
Mgbe ahụ wụrịa na ikuku dị ka nku, na-agbatị ụkwụ gị kpamkpam. Nhọrọ ọzọ n'ikuku site na iweta ụkwụ aka ekpe gị n'ihu na ụkwụ aka nri azụ. Banye na nri ehihie ma bido ahụ gị n’ime ntopute na-esote n’enweghị ezumike.
Lọ ezumike na-etolite ume na ntachi obi gị site na ịchele quadriceps, hamstrings, calves, buttocks, and hip flexors. Ọzọkwa, ọ bụ mmega ahụ zuru oke nke cardio nke ga-eme ka isi gị sie ike, meziwanye nhazi gị, ma wulite nkwụsi ike nkwonkwo ụkwụ. Mee mgbatị ahụ maka nkeji 1 tupu i nwee ike, mgbe ahụ gaa ogologo gaa 8 Nzọụkwụ Ntuziaka Maka mmega ahụ a, ị ga-achọ bench, nzọụkwụ anaerobic, ma ọ bụ ihe siri ike nke ọma yana ikpere dị elu.
Guzo n'ihu ikpo okwu ị họọrọ ka ụkwụ gị dịrị n'otu na obosara ubu. Guzosie ụkwụ aka nri gị n'ụdị ikpo okwu, site na ịfefe ụkwụ ahụ, kpoo ahụ gị na ikuku ruo mgbe ụkwụ aka ekpe gị ga-esote aka nri gị. Ikwusi maka Sekọnd ole na ole, ma buru ụzọ belata ụkwụ aka ekpe gị wee mezie aka nri gị n’ala.
Omume a na-arụ ọrụ nke ọma na akwara gị niile na ụkwụ gị yana ọmarịcha gị maka ego agbakwunye! (Enweghi ike ịnwe ụkwụ akwara siri ike n'okpuru mgbatị dị larịị ugbu a!) Mee usoro mgbatị ahụ atọ na ugboro iri na abụọ maka ụkwụ ọ bụla. Tinyegharịa otu ụkwụ tupu ịgbanwee nke ọzọ. Emela ezumike site na ịgbanwee ụkwụ, zuo ike maka ọkara nkeji n'etiti usoro.
I kwesịkwara ịmara na mmega ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị ike na ikpere gị - mee ihe niile nwayọ na n'ụzọ a na-achịkwa. 9. Akwa mmiri dina otu ụkwụ Dina n’ala dina ala n’akụkụ gị, ụkwụ gbue ikpere gị n’ala, ụkwụ gị ga-agbada n’ala Ugbu a bulie ụkwụ aka nri gị n’ikuku, mee ka ikpere gị hulata ntakịrị.
Kpoo isi gi na iwe gi ma bulie hips gi n'ala ka aru gi we guzobe uzo site n'ubu gi rue aka ekpe gi. Jide ọnọdụ a maka sekọnd ole na ole, mgbe ahụ, na-enweghị wedata ụkwụ gị, laghachi na ọnọdụ mbido gị na azụ n'ala. Agbanyela na ụkwụ aka nri tupu ịmeghachi ugboro ugboro niile n'aka ekpe, nke bụ 12.
Na n'ezie nhazi 3 ezuru maka ụkwụ ọ bụla! Akwa mmiri nwere otu ụkwụ bụ mmega ahụ dị ukwuu maka imega ihe atọ niile, imega ahụ, na iwusi azụ gị ike dị ka ọ dịrị gị mfe, jiri mgbịrịgba ma ọ bụ dumbbell mee mgbatị ahụ. Jide n'aka na ị ga-ezere mmejọ kachasị nke ndị mmadụ na-eji eriri ụkwụ nwere otu ụkwụ. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike iduga na nhụjuanya azụ dị njọ! Ọzọkwa, ekwela ka úkwù gị saghee ma ọ bụ bugharia - debe ihe niile ka ọ na-achịkwa. (Have ga-eji akwara gị mee ihe a!) Olee omume ị na-eme iji zụọ ụkwụ gị? Mee ka m mara n’ihe a! Ọ bụrụ na ị mụta ihe ọhụrụ taa, dịka edemede a ma soro enyi gị kerịta ya.
Ma - hey! - atụla isi ala ma wụpụ! Anyị nwere ihe karịrị 2,000 isiokwu dị mma iji lelee. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, pịa na ya wee nwee ọ !ụ! Nọgide na ndụ dị mma!
Kedụ ka m ga-esi wuo ụkwụ m n’ụlọ?
Mee nke aLegkwụMgbatị AtUloIjiMee ka nke Gị sie ikeIsi Ozo
1 Squat. Setịpụ 3 Reps 10.
2 Ezumike. Setịpụ 3 Reps 10 n'akụkụ ọ bụla.
3 Pistol squat (ma ọ bụ single-ụkwụ) Kwadebe 3 Reps 10 n'akụkụ ọ bụla.
4 tụtụ ọma. Setịpụ 3 Reps 10.
5 Inyinya-ibu n kickti nkpu. Setịpụ 3 Reps 10 n'akụkụ ọ bụla.
6 Akụkụ nri. Setịpụ 3 Reps 10 n'akụkụ ọ bụla.
7 Nwa ehi bulie.
8 Glute akwa.
Bob na Brad ♪♪ Fisiotherapists abụọ a ma ama ♪♪ Na Ntanetị ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, physiotherapist - Brad Heineck, physiotherapist - Anyị niile bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere physiotherapists na ịntanetị - N'echiche anyị, nke N'ezie, Bob. Taa, anyị ga-ekwu maka ụkwụ adịghị ike, ihere? Anyị ga-egosi gị mmemme mmegide abụọ ị ga-eme n'ụlọ nke dị mfe ịme mana ọ ga-ewulite ma kọwaa akwara ụkwụ gị - Ikike, ma ọ bụrụ na i mebeghị ọrụ iguzogide ọ bụla ị nwere ike ịmalite na-enweghị ma wuo ya, nke ahụ abụghị nsogbu. Chọpụta, anyị niile nwere nhọrọ, onye mbido ma nwee ọganiru.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ na ọwa anyị, biko were nkeji nke abụọ ka ị denye aha, anyị ga-ewetara gị akụkọ gbasara etu ị ga-esi gbasie ike, na-enweghi nsogbu na mgbu, anyị ga-ebugo kwa ụbọchị. Gaa na bobandbrad.com, gaa na ngalaba inye ego n'izu a, anyị na-enyefe Mass2 Q2, obere ịhịa aka n'ahụ.- N'ebe a, lee nwa a anya.- Ndị a dị oke mma, ha dị ike, ma na-eme ya n'ezie ị ga-enweta ike h ha.- Ee. - N’ihi na ha dị otu a ha dabara nke ọma n’aka gị. - Ergonomically ziri ezi n'ihi na gị adịgide. - Eeh, ma inwere ike itinye ya n’akpa ma obu n’akpa ma obu
Ee, ka anyị gaa n'ihu. - Ọ dị mma, ọ dị mma, gaa Facebook, a ga-atụdo ya n'elu peeji ahụ, asọmpi ahụ. Gaa na Twitter, Instagram ma ọ bụ TikTok, ma ọ bụ anyị nwekwara pọdkastị. - Podcast, ị nwere ike nzọ na e nwere nsụgharị 60-nke abụọ.- Nri, na anyị nwere nlele 60 nke abụọ YouTube. - Gini bu aha ha na YouTube? - Bob na Brad mkpachị. - mkpachị, ee.
Yabụ na ndị mmadụ enweghị mmasị na anyị na-aga etu anyị si eme ugbu a. - Eeh. Ọfọn, ha na-enye ọ bụ ụdị nke 60 nke abụọ a - anyị na-ekwu okwu ngwa ngwa - ee. - Ọ dị mma.
Yabụ, m ji kpọrọ ihe, Bob, enweela m ndị enyi, nwoke ma ọ bụ nwanyị, ha na-atụ egwu iyi uwe nịịkọ n'oge ọkọchị n'ihi na ha nwere obi ike - Ee, nwee ntụkwasị obi n'ụkwụ ha, ma ha pere mpe ma ọ bụ ma eleghị anya, dị oke chubby. Ma anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ya, ị nwere ike ime ya n'ụlọ, ịkwesighi ịnwe igwe buru ibu, ị nwere ike ọ gaghị achọ onye na-emegide gị, mana n'oge ụfọdụ ị ga-achọ ihe mgbapụta ka m wee gosi gị ụzọ dị ọnụ ala iji ụzọ dị irè maka iguzogide.- E wezụga nke ahụ, ọ na-arụ ọrụ.- Na-arụ ọrụ.- Ee, ị ga-eji akwara ndị a mgbe ị na-ebuli elu, ma ị na-arụ ọrụ arụmọrụ.
Nyaahụ, aghaghị m ịsa mmiri anyị na-ekpo ọkụ ma ọ na-ewe ogologo oge, ejiri m ya na agụụ ụlọ ahịa. Na m ga-ewepụsị bọket 50 zuru ezu, ọ dịkwa ka, bọket ọ bụla dị ka paụnd 20, yabụ achọrọ m kilogram 40 na m squat - Oh, ọ bụrụ na ị ga - eme ihe ndị a ọ gaara adị mfe - Ee, ọ gaara .- M na-eche ebe ọ ga-eso ya.- Achọrọ m ihe ya na ya. (chuckles) - Ọ dị mma, ka
Ya mere, uru nke ahụ, ma ị maara na anyị nwere ike ịme nke a dịka mmega ahụ siri ike, - O doro anya. - Iji mee ka ọ dịkwuo nta na sayensị. Na ịchọrọ ime ihe zuru oke na nke ahụ Ọ bụ gị Anyị ga - eji akwara, hips, ụkwụ, quads, hamstrings, ị ga - akpọ calorie ọkụ, ị ga - eme ka ụkwụ sie ike yana na quadriceps ndị ahụ anyị ga - arụkwa ọrụ ka ị nwee ike ịkọwa ndị ahụ mọzụlụ, n'ihi ya ị ga-enweta ụkwụ ndị a mara mma.
Ya mere, m ga-amalite site na ịnwa ịme 10 ugboro, otu nke 10, lee ka ọ dị gị n'echi ya. Ọ bụrụ n ’ezigbo ọnya, chere otu ụbọchị. N'ikpeazụ ụbọchị atọ n'izu, Mọnde, Wenezdee, Fraịdee, ị nwere ike ịga ụbọchị ise n'izu ọ bụla ịchọrọ
Ọ bụrụ n ’ị ga - ejide ya n’ihi na anyị achọghị ka ị na - ejegharị n’ụzọ dị mwute na-akọcha Bob na Brad - Aka nri, ọ bụrụ n’ịchọrọ iguzogide, ị ga - eme ya ụbọchị atọ n’izu ụka. - Nri. - Kedu ihe i kwuru? - Mọnde, Wenezdee, Fraịdee.- Ee, mana ọ bụrụ na ijiri nguzogide, ị nwere ike ịme ya kwa ụbọchị ise n'izu.- Ọ bụ eziokwu, ee, enwere ndị nwere ike ịmara ya nke ọma. - Ee. envelopu. - O doro anya, n'aka.- Ọ dịịrị gị.
Odi nma, ka anyi bido site na ndi squats - ndi squats. - Eeh. Ugbu a gaa n'ihu, Bob - Aga m eme nke ahụ, ọ dị mma ịnọ ebe a.
Ya mere, m na-eweghachite ogwe aka m ka m wee nwee ike ịpịa ubu m.- Ee.- Ma anyị You ga-enwe ebe sara mbara, ma ịchọrọ ịgbago dị ka o kwere mee, nke na-abụghị nke m. .
Ya mere lelee azụ ya, nke ahụ bụ nnukwu ihe, n'ihi na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị rụtụbeghị mbụ, ị bụ onye mbido, ebe a bụ ezigbo ebe ịmalite, ejikwala ndị na-eguzogide ya. Ọ bụrụ na ị pụọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ìgwè ndị na-eguzogide ozugbo, ị nwere ike ịzụta ìgwè ndị a, ha na-abata n'ụdị 5. will ga-ahụ teepu dabara, nke dị mfe dị mfe, nke siri ike siri ike. - Ee, echere m na enwere ike iji ya maka ihe ndị ọzọ, maka mmemme mgbatị ndị ọzọ, yabụ - Ya mere aga m eji akaghị aka a.
Nke a masịrị m nke ukwuu, ị zọọ ụkwụ ebe a, buru akpụkpọ ụkwụ gị, ọ dị mma iji akpụkpọ ụkwụ yikwasị. Anyị ga-agabiga otu a, ikpere aka, gburugburu n'ubu dị ka nke a, jiri aka ụdọ laghachi azụ ka ị wee nwee ọfụma, m ga-ejide ikiri ụkwụ gị n'ala - nke ahụ na-enye gị nguzogide ntakịrị Ọzọkwa, nri? - Oh ziri ezi, ee, ọ bụ nnukwu mmega ahụ, m na-arụ ọrụ azụ m, úkwù m.- Na-elekọta ihu gị ka Brad, ọ bụghị nke ọzọ, Ee, ya mere ha nwere ike ịhụ, hụ, ọ na-ebupụ n'ubu ya.- Ya mere Echere m na azụ.- Ee.- Dị ka ndị na-agwọ ọrịa, anyị na-achọ mgbe niile ka ọ dị mma ịgụnye mmemme anyị niile.- Tinye uwe elu gị na Brad.- Oh, ndo.
Bob, nke a bụ ihe igwe okwu m. Ọ bụ, ị maara, ike gwụrụ m. Mgbe ahụ ị nwere ike ezumike - ee. - Ugbu a bụ nri na-esote.
akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe
Ugbu a, ka anyị lekwasị anya na akwara quad. - Na HIIT, nke bụ mgbatị mgbatị dị elu nke ịchọrọ ịme, ị nwere ike ịme ọtụtụ dịgasị iche, dịka sekọnd 30 na, 30 sekọnd apụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ ime maka nkeji na na nkeji abụọ gbanyụọ - Aka nri, aka nri.
Ya mere, ịchọrọ nkwụsịtụ a, ndị fọdụrụ na-agbaji nkatọ. - Eeh. - Ugbu a, anyị na-eme lunges, ị nwere ike ịmalite dịka Bob ga-eme.
Ọfọn. - Ma jiri Booyah Stik. - Ọ bụ m nwere a aka maka itule.
Anyị ga - egosi gị otu esi eme ya nke ọma.- Oh, ee, achọghị m ka ikpere gafere ụkwụ m ka m ghara ịga n'ihu otu a .-Nke .- Achọrọ m ya ịgbadata n'ụzọ a, nke ahụ bụ igodo a, ị na-ehulata ala na-achọ ikpere gị n'ala. - Ee, egbula ikpere gị nke ọzọ n’ala n’ihi na ọ ga-ewute gị. - Aka nri, aka nri. (Brad chuckles) Ma mee n'akụkụ abụọ. - Ee, mee akụkụ abụọ ahụ.
Ugbu a na akaghị, were ya n'aka gị dị ka nke a, ị ga-azọpụ ya ọzọ, ka anyị kwuo n'etiti etiti ụkwụ, n'akụkụ ụkwụ ụkwụ, dị ka nke a. Ihe m choro ime bu na m gafere ya otu a, m ga-ejide aka m n'ime ya ma mee ihe obula i kwesiri ime iji kpochie ya, ma i nwere ike ijide ya n'aka gi wee malite ime ihe ndia , na ọ na-eme nnukwu ọdịiche. Anyị ga-eme 10, ị ga-eche na quadriceps na-ere ọkụ. - Ya mere, ị na-arụ ọrụ na ụkwụ ụkwụ ahụ. - Oh, ebe a, quad m, ọ bụ - Ee, ee, echere m na ọ na-ere. - Ha na-azụkwa apata ụkwụ na hips, mana n'ezie- - Na mgbapụta, ndị glutes nwekwara obere ụzọ. - Ma ị ga-enweta isi, yabụ na ị na-enwe ntụpọ nke ọma.- Ee. - Ya mere.- Ọ dị mma, yabụ na ị na-eme 10, zuo ike, mgbe ahụ ị nwere ike ịlaghachi.- Ma mee usoro ọzọ.- Ee, malite ịme squats ọzọ.
Ya mere, ọ bụ naanị omume abụọ a, ha na - eme nnukwu ihe ị na - arụ ọrụ niile ị chọrọ, oh.
Ma ị ga - - Ọzọ, ka anyị hụ ka nke ahụ si sụgharịa, mgbe ịnwere ịtụtụrụ ihe, ị ga-ehulata ala ma debe ezigbo ọnọdụ.- Nri.- Ma ị nwere ume ịme ya.- Ya mere nke ahụ kọwara ihe kpatara ya ị gwara akụkọ ogologo gbasara ịtọfu bọket mmiri na trough, ị nwere ike ime ya n'ụzọ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ na-esikwu ike na ọfụma.
Ike na-agwụ m, m ga-akwụsị.- will ga-ewu otu ụkwụ ahụ, ọ ga-adị ka nke ahụ.- Amaara m, amalitere m ịga gburugburu, gburugburu.
Yabụ ihe ndị a bụ mmemme abụọ ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ike iwuli elu atọ nke 10, yana nkwụsị n'etiti ụbọchị atọ n'izu, echere m na ị na-eme nke ọma. Na-eme karịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ, ma kpachara anya. - Ee, lelee ya, daalụ. (egwu dị egwu)
Kedụ ka m ga-esi zụlite ụkwụ m abụọ n’ụlọ?
Squats. The squat bụ otu n'ime ihe kacha mmaomumeka ụdaụkwụ.
Ugbo. Lunges na-arụ ọrụ gịapata, butt, na abs.
Plankụkwụna-eweli Mgbe planks nwaa ndịeluahu, isi, na hips.
Naanịụkwụndị nwụrụ anwụ.
Kwụsie ike ikpere ikpere tucks.
7. Igbe awụli elu.
Speedskater na-awụli elu.
Kedụ ka m ga - esi nweta ụkwụ na - egbu egbu n'ụlọ?
Nwetagbasie ike ma sie ikeụkwụ n'ụlọya na ise ndiaụkwụ na-egbu egbuụbọchị omume!
LegkwụMgbatị #bọchị # 1: Skater Jumps.
LegkwụEmega #bọchị # 2: Jump Squats.
LegkwụOmume Day # 3: Russian Deadlift.
LegkwụMgbatị ụbọchị # 4: Otu agbụ squat side shuffle.
LegkwụMgbatị ubọchị # 5: Sumo squated dị arọ na nwa ehi.
June 18. 2018 Nov.
Otu narị squats ọ dị mma kwa ụbọchị?
Ole squats ole ka m kwesiri ime otu ubochi?
Mgbe ọ bịaraole squatsgịkwesịrị imen'imeụbọchị, ọnweghị nọmba anwansi - ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụna-eme squats, Ebumnuche maka usoro 3 nke 12-15 reps nke ọ dịkarịa ala otu ụdịsquat. Omume ụbọchị ole na ole n’izu bụ ebe dị mma ịmalite.06.15.2018
Ndi 200 squats ga eme ihe obula?
Kedu ihe ga-eme 200ma ọ bụ karịasquats kwa ụbọchị na-eme?200 squatsmakaụbọchị bụezigbo ego. Gịgakwesịrị ịrụ ọrụ ruo ọkwa a ma ọ bụghị yanwere ikemmerụ ahụ, nagaadị ezigbo ụfụ mgbe e mesịrị.200 bụolu zuru oke iji kpoo quads na glutes.
Kedu otu esi eme mgbatị ụkwụ n'ụlọ?
Mee Ka Mgbatị Homelọ Gị Na-arụ: Legkwụ 15kwụ 15, 3zọ 3. 1 1. Igwe ikuku ma ọ bụ ịwụ elu: 3 set nke 10 reps. Image site Dima Bazak. 2 2. Àkwà mmiri hip: 3 setịpụrụ 12 reps. 3 3. Ndagharị akpa ume ma ọ bụ na-awụli elu: 3 usoro nke 10 reps. 4 4. Otu ikpere ụkwụ nwụrụ anwụ: 3 set nke 15 reps na ụkwụ ọ bụla. 5 5. Nzọụkwụ: usoro 3 nke 15 reps na ụkwụ ọ bụla.
Kedu ihe mgbatị ụkwụ kachasị mma maka ụmụ nwanyị?
Fọdụ mgbatị ụkwụ kachasị mma maka ụmụ nwanyị na-eji ngwa ndị dị mfe dịka dumbbells, bọọlụ kwụsie ike, ụfọdụ ndị agha na-eguzogide, na ma eleghị anya kettlebell, iji nweta ụgwọ ọrụ ụbọchị ụkwụ. Iji zọpụta gị ụfọdụ nsogbu, agbajisịrị m 25 nke ụkwụ kacha mma ị ga - eme.
Kedu mmega ahụ kachasị mma maka apata ụkwụ na Butt?
Lunges bụ mmega ahụ magburu onwe ya maka iwusi ume na ịkụnye apata ụkwụ na isi. Jiri ụkwụ aka nri gị gaa n'ihu na ụkwụ aka ekpe azụ. Jiri nwayọ gbagoo ikpere ruo mgbe ụkwụ abụọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ziri ezi. Mgbe ahụ inupụ azụ ka amalite ọnọdụ. Echefula idebe azụ gị nke ọma ma kwe ka ikpere gị gbasaa na mkpịsị ụkwụ gị.